2012 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
မြန်မာ့ဂုဏ်မြှင့်ချင်လွန်းလို့ (၂ )
ကြောင်းပြု၍သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ကိုကျင်းပကြပါသည်၊ထိုကဲ့သို့ ဘုရားရှင်တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှလူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်တော်
မူခဲ့သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ တာဝတိံသာပွဲတော်ဟု၎င်း၊တာဝတိံသာနတ်ပြည်
၂။ The Burman by Shwe Yoe
Posted by burnmwatchinternational at 8:16 AM0comments
၁။ဗန်ကူး ဘားမြို့ တွင် နိုဝင်ဘာ လ ၃ ရက် နေ့၊
၂။ တိုရွန်တို မြို့ တွင် နိုဝင်ဘာ လ ၄ ရက် နေ့နှင့်
၃။ ကယ်ကာရီ ၊ နှင့်စစကားချွမ်ဝမ် မြို့ ကြီး များ တွင် ၁၀ ရက် ၁၁ ရက်
တို့ တွင့် သာသနာ ပြုတရားလှည့် လည် ဟောပြော ခြင်း ၊ ၈၈ မျိုးဆက်များနှင့် တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေးခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ် ကြောင်း သိ ရပါသည် ။
Posted by burnmwatchinternational at 2:16 PM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 8:24 AM0comments
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်းတို့ တွေ့ဆုံစဉ်။
မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည် မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို နှစ် (၄၀) အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ နယူးဒေလီမြို့မှာ ကျင်းပမယ့် ဂျာဝါဟလာနေရူး အောက်မေ့ဖွယ် ဟောပြောပွဲမှာ ဟောပြောပို့ချမယ်လို့ သံတမန်တဦးက ပြောပါတယ်။ ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို အပြီးသတ် မရေးဆွဲရသေးပေမဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို နိုဝင်ဘာ (၁၂) ရက်မှာ ထွက်ခွာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယ သတင်းစာတွေကတော့ နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဆုံချိန်က နေရူးအောက်မေ့ဖွယ် ဟောပြောပွဲမှာ ဟောပြောဖို့ ၀န်ကြီးချုပ်က ဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ။
မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မှာ ခန့်အပ်ခံရပြီးတဲ့နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နယူးဒေလီမြို့မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by burnmwatchinternational at 7:21 PM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 2:39 PM0comments
ဆရာကြီးဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ရဲ့ ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေး
လိုက်ပါတယ်၊အောက်ပါ link ကိုသွားပြီးဖတ်
Posted by burnmwatchinternational at 8:34 AM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 8:59 AM0comments
2012 Edmonton Heritage Festival and Heritage Project
Dear all members of BCSA and friends of BCSA,
I would like to share the following information regarding Edmonton Heritage Festival with you all.
In addition, you can read the news about Heritage Project in today Edmonton Journal OR you can visit the link: www.edmontonjournal.com/heritage , and watch the video showing 72 new immigrants talking about the country they left and why they chose Edmonton. Pho Kwa (Saw Min Soe ) is one of them.
Haveanice and enjoyable long weekend.
Tel:780 439 7555
အက်ဒမင်တန်ဂျာနယ်မှဦးစီးထုတ်လုပ်တဲ့Heritage Project တွင်ဖိုးခွား(စောမင်းစိုး)ပါဝင်ပြီးသူဘာ့ကြောင့်အက်ဒမင်တန်ကို
Servus Heritage Festival 2012 marks the 37th annual of this premier three-day showcase of Canada’s vibrant multicultural heritage. We will feature 62 pavilions representing over eighty-five cultures from all over the world. Sample culinary delicacies, see creative performances, shop for crafts, artwork, and clothing, or chat with people eager to tell youalittle about their cultural roots and their present-day communities in Canada.
Posted by burnmwatchinternational at 8:56 AM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 8:55 AM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 8:53 AM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 1:38 PM0comments
Posted by burnmwatchinternational at 1:16 PM0comments
2012 Edmonton Heritage Festival and Heritage Proje...